OBC 48v 60v 72v batteriga cha ...
Xeedho dusha sare 48v 72v 96 ...
DCNE-variable xeedho garaaca wadnaha inta jeer ee isbedelaya - Alaabooyin kulul
DCNE silsiladda isdabajooga isdabajooga silsiladda xeedho taxanaha ah waxay korsataa "superposition total pulse charing fast and discharging technology" iyo "ogaanshaha otomaatiga ah ee la qorsheeyay ee sharciyeynta iyo soo saarida geeddi-socodka hal-abuurka ah", Waxay si weyn u wanaajin kartaa wax-ku-oolka iyo tayada, si weyn u gaabinaysa waqtiga lacag-bixinta, si wax-ku-ool ah u kordhinaysa batteriga nolosha, hal-abuurnimo xaaladda lacag-bixinta ee baabuurta korontada ku shaqeeya, oo xaqiiji "waxtarka sare, ilaalinta deegaanka iyo keydinta tamarta".
6.6KW OBC oo leh PFC cc cv batari xeedho 144V 198V 320VDC
Xeedho garaaca wadnaha beddelaadda si buuxda u xiran ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu buuxiyo baytariyada danab sare ee baabuurta tamarta cusub. Awoodda korontada waxay qaadataa naqshad hawo-qaboojiye ah waxayna la jaanqaadaysaa shirkadaha caalamiga ah ee soo saara korontada ee casriga ah. Waa mid ka mid ah waxsoosaarka cufnaanta sare ee adduunka, tilmaamayaasha waxqabadkooduna waxay gaareen dhiggooda caalamiga ah. Heerka, waqtiga socodka dhib-la'aanta ah ayaa ka dheer, taxanahan sahayda korantada sidoo kale waxaa lagu dabaqi karaa beero kala duwan oo u baahan danab joogto ah iyo koronto joogto ah.
smart smart on board 72v 60 amp 50 amp 80 amp lifepo4 xeedho lithium
Si fudud loo isticmaalo, aamin ah oo caqli badan. Si otomaatig ah u aqoonso nooca batteriga iyo danab ka dib isku xirka batariga. Looma baahna in gacanta lagu hagaajiyo danabka iyo kan hadda socda, isla markaana si otomaatig ah ayuu u xirmayaa kadib markii si buuxda loo soo oogay.
48v 72v 80v 96v 144v 312v 6600w EV dusha xeedho LFP / xeedho NCM oo leh CAN
Batariyada aashitada leedhka ma lahaan karto shaqooyinka BMS iyo CAN; baytariyada lithium waxay leeyihiin BMS. Marka loo eego baahida macaamiisha, xulo haddii xeedhoku leeyahay hawl wada xiriirka CAN.
6.6KW OBC Gawaarida Gawaarida Gawaarida 117.6v 50amp
Noocyada batteriga badanaa
Lifepo4,18650, Lithium ion baytariga
Factory jumlada 48v 72v 96v 144v 312v xeedho batari / li-ion xeedho batari 3300w dusha xeedho
Iyadoo la adeegsanayo xuduudaha kontoroolka ciribtirka madaxbannaan, aqoonsiga otomaatigga ah ee baytariyada lithium, hal-hal-ku-oogidda ku habboon. Better ilaaliyo batteriga AGM, batari lifepo4.
BARNAAMIJKA isgaarsiinta iyo bateriga BMS ku xirida, danab, waqtiga iyo waqtiga xirida waa la hagaajin karaa. Macaamiisha u keen macaan badan.